हत्या र ३३ किलो सुन प्रकरणका नाइके ‘गोरे’ अचानक पक्राउ | Rajmarga
हत्या र ३३ किलो सुन प्रकरणका नाइके ‘गोरे’ अचानक पक्राउ
काठमाडौ । तस्करीको ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्याकाण्डका मुख्यअभियुक्त चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ पक्राउ परेका छन्।इन्काउन्टरको तयारी भइरहेको भनिएका बेला अचानक उनलाई पक्राउ गरिएको हो । उनी लामो समयदेखि फरार रहेका थिए ।
गृह मन्त्रालयमा साढे १२ बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर गोरेलाई सार्वजनिक गरिदैँछ। उनलाई बचाउन प्रहरीभित्रैबाट ठुलो प्रयास भइरहेको आशंका गरिएको थियो ।
घटनालाई लुकाउन प्रहरीले भूमिका खेलेको आरोप छ । यसबारे छानविनका क्रममा महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमख एसएसपी दिवेश लोहोनी, डीएसपी प्रजित केसी र सई बालकृष्ण सञ्जेल हेडक्वाटर तानिएका छन् ।
घटनाको अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्रालयले सह-सचिव ईश्वर पौडेल नेतृत्वको छानबिन समिति बनाएको छ भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पुष्कलराज रेग्मीको नेतृत्वको समिति बनाएको थियो ।
गोरे को हुन्?
गत फागुन १८ गते मोरङका सनम शाक्यको हत्यापछि नेपालमा हुने सुन तस्करीमा प्रहरीका उच्च अधिकारी नै मुछिन थालेका छन्। तस्करी गरेर ल्याएको साढे ३३ किलो सुन बाटोबाटै गायब पारेको भन्दै सुन भरिया शाक्यको हत्या भएको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ।
गृह मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिले यही विषयमा महानगरीय अपराध महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख दिवश लोहनीको सरूवा गरेको छ भने चैत २८ गते अवकाश पाएका पूर्वडिआइजी गोविन्द निरौलालाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ।
तीन जनाको मृत्यु र उच्च प्रहरी अधिकृत मुछिएको यो सुन प्रकरणका नाइके हुन्- चुडामणि उप्रेती तर उनी गोरे नामले बढि चिनिन्छन्।
सनमको हत्यापछि व्यापक खोजी गरे पनि प्रहरीले अहिलेसम्म गोरेलाई पक्रन सकेको छैन।
मोरङको उर्लाबारीका गोरेलाई नेपालमा हुने सुन तस्करीको डन अर्थात् ‘गोल्ड डन’ पनि भनिन्छ। नेता, व्यापारी र प्रहरी उच्च अधिकारीसँगको सम्बन्धका आडमा उनले सुन तस्करी गरिरहेको प्रहरी स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो।
गोरेले भारतीय सेनामा जागिर खाने प्रयास गरे पनि सफल भएनन्।
उनी नेपाली सेनामा भर्ना भए, तालिम पनि गरे। सेनाको जागिर छोडेर केही समयपछि उनी दुबई गए। दुबई प्रहरीमा जागिर खाए। त्यही क्रममा दुबईका सुन माफियासँग उनको सम्बन्ध गाँसियो।
Previous post: सन्दीपको खेलको चर्चासंगै परिवार दंग
Next post: सर्वाधिक खोजी गरिएका गोरे कसरी काठमाडौ फेला परे ? सिंहदरबारमै गोरेले यसरी खोलेर देखाइदिए (भिडियोसहित)
नेकपाको बैठक आज पनि बस्न सकेन, यस्तो छ कारण